> Resource > Android > Hel Best Sony Vegas Alternative for Windows
Sony Vegas Pro waa barnaamijyada video tafatirka caanka ah ee Windows. Waxay bixisaa leh video tafatirka hufan ay ka mid yihiin tifatirka audio, video tafatirka, guurka, iyo koobab, iyo in ka badan. Laakiin sug daqiiqad ah, Sony Vegas Pro aan feature aad rabto? Ma dajiyaan kartaa video il faylasha? Wixii dhibaato kale? Waxaa rid oo ka heli a kale Sony Vegas for Windows in this article.
By jidkii, Windows Live Movie Uumahaaga kale oo lacag la'aan ah si ay u Sony Vegas. Laakiin Windows Live Movie Kan sameeyey wax badan ka yar xoog badan Sony Vegas yahay iyo mararka qaar waxa ay hoos u bidbidayaan. Waxa lagugula talinayaa inaad si aad u hesho kale Sony Vegas for Windows hoos ku qoran.
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) - fududahay in la isticmaalo weliba awood leh
Wondershare Video Editor ku siinayaa dhammaan qalabka video tafatirka loo baahan yahay inaad u baahan tahay. Waxaa gelineya inaad si ay u abuuraan filimada guriga Hollywood-sida la kala guurka, horyaal, saamaynta ka mid videos, audio iyo sawiro. Astaamaha sareeya sida tafatirka waqtiga, Picture-in-Picture, si degdeg ah / mooshin gaabis ah, isbedel cod, video / duubista la sameeyey fududahay in la isticmaalo. Waxa ugu muhiimsan waa in fursadaha wadaagga yihiin dhamaadka lahayn. Waxaad la Upload fududahay in YouTube, Facebook, iwm isla qoyska iyo saaxiibada wadaagi karaan Or badbaadin videos inuu u ciyaaro ee qalabka la qaadi karo sida iPhone, iPad, Samsung Galaxy Note, huriyaan dab, iwm ama gubi DVD wanaagsan ilaalinta iyo in la wadaago.
Adobe Premier Qaybaha - Barnaamijka A sida Sony Vegas
Markii alaabta la tilmaamay iyadoo Adobe, waxay ka dhigan tahay tayo sare leh, qaab ciyaareed fiican, oo si joogta ah barnaamijka kale ee Adobe. Adobe jilitaankii Qaybaha waa Sony Vegas kale u fiican tahay Windows (version Mac sidoo kale la heli karo). Sida waxa uu sheegay in ay homepage "# 1 macaamiisha software video tafatir ah", Adobe waa editor video caan ah oo isticmaala guriga.
Wixii xirfadlayaasha, Adobe Premier Pro waa Sony Vegas kale u fiican tahay Windows. Waa version sare oo jilitaankii Cunsurka kala duwan oo ku Qabsashada, waqtiga tafatirka, tafatir badan isku xigxiga, DVD menu, isku wareejiyeen qodan dhawaaqa, iwm
ZS4 Video Editor - Alternative Free in Sony Vegas ee Windows
ZS4 Video Editor waa Sony Vegas kale oo lacag la'aan ah Windows, Mac iyo Linux. Waxaa ugu wayni waxay tahay cusub oo lacag la'aan ah Zwei-Stein Video Editor. Waxaa la iman qalabka tafatirka video fudud iyo 150 saamaynta video, laakiin interface sidaas ma aha user-friendly. Marka loo eego Wondershare Video Editor iyo Adobe jilitaankii , ZS4 Video Editor ma aha tafatirka software caadi video ah, laakiin lacag la'aan ah waa arrin ugu muhiimsan ee habkan badalka Sony Vegas.